प्रधानन्यायाधीश कार्कीको भावी रणनीति, तरङ्ग पैदा गरेर विदा हुने - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशबाट प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव तत्काल असफल भयो । कार्की आइतबार सर्वोच्च अदालतमा फर्किन । आइतबार नै ब्यवस्थापिका संसदका प्रमुखका हिसावले सभामुसख ओनसरी घर्ती मगरले पत्रकार सम्मेलन गरेर भनिन संसदको क्षेत्राधिकारमा धावा बोल्न पाइदैन ।
प्रधानन्यायधीश विरुद्धको महाअभियोग राजनीति विषय बनेको छ । कार्यपालिका न्यापालीकाबीचको टकराव देखिएको बेला विचमा व्यवस्थापिका संसदमा पनि मसिएको छ । पछिल्लो लडाई दुईवटा महिला न्यायापालिका प्रमुख कार्की र ब्यवस्थापिका प्रमुख घर्तीबीचमा केन्द्रित बनाइएको छ ।
५ दिन निलम्बित बस्नुपरेका कारण आक्रोशित प्रधानन्यायाधीश कार्कीले शुक्रबारनै सांकेतिक रुपमा बालुवाटार निवासबाटै कार्यभार पुनः सम्हालेकी थिइन । उनको आइतबारको सर्वोच्च अदालत यात्रामा धेरैको नजर थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा थर्कमान पनि थिए । खासगरि अब कस्तो निर्णय आउला भन्नेमा ।
भ्रष्टाचार मुद्दालाई किनारा लगाउन गति बढाइरहेकी कार्कीको कदममा ब्रेक लगाउन प्रचण्ड र देउवा केही हदसम्म सफल भएका छन् । तर अब के हुन्छ ? सबैको ध्यान यसमा नै केन्द्रित भएको छ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल शेरबहादुर देउवाविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरण पनि सुल्झिएको छैन । न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासबाट शुक्रबार जारी भएको आदेशले कार्यपालिका र ब्यवस्थापिकाको नेतृत्व रुष्ट छ ।
प्रतिपक्ष एमाले खुसी देखिएको छ । कांग्रेस र माओवादीनिकट युवाहरुले अदालतको विरुद्धमा प्रदर्शन नै गरेर अदालतको मानहानी गरिसकेका छन् । स्थानिय तहको पहिलो चरणको चुनावअघि महाअभियोगको विषयमा मौन अवधि मानिएको छ । संसद स्थगन छ दलहरुले सहमति पनि त्यही गरेका छन् । कार्कीले अब अदालतमा बसेर के गर्छिन त्यसलाई सत्तापक्षले पर्ख र हेरको रणनीति बनाएको छ । आइतबार र सोमबारका कदमले कार्की कडा रुपमा आउने देखिएको छैन । उनले आफुलाई इजलास तोकेकी छैनन ।
के बाँकी अवधिमा उनी इजलास विहीन नै बस्लिन त ? अदालतको उच्च स्रोत भन्छ उनले केही मुद्दाको फाइल अवलोकन गरिरहेकी छन्,जानुअघि भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दामा महत्वपूर्ण फैसला गर्ने तयारी छ । तर, कार्कीले बनाएको योजना अनुसार नै उनी अगाडी बढेर भ्रष्टाचारी, अदालतभित्रका भ्रष्टआचारण भएका न्यायाधीश विरुद्धको कारवाही अगाडी बढ्छ या निस्कृय रुपमा रहलिन केहीदिनका गतिविधिले संकेत गर्नेछ । स्रोतका अनुसार उनी पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलगायत केही नजिककासँग आगामी रणनीतिका विषयमा छलफलमा छिन् ।
6326 पटक पढिएको